Nagu saabsan - Linyi Yilibao Qalabka Qoyska Co., Ltd.
Shirkadeenu waa Linyi Yilibao Household Products Co., Ltd. waxaan nahay soo saare u heellan soosaarka iyo iibinta alaabada guryaha iyo wax soo saarka ilmaha, waxaan leenahay khadadka wax soo saarka xirfadlaha ah iyo awooda wax soo saar aad u fiican.
Shirkadeena waxay ku taal Linyi City, waxaa iska leh Gobolka Shandong, waqooyiga Shiinaha. Linyi City waa mid ka mid ah xarumaha saadka ee waqooyiga Shiinaha. Gaadiidku waa mid aad u habboon. Waxay aad ugu dhow dahay dekedda Qingdao. Badanaa waxaan isticmaalnaa Dakada Qingdao si aan wax uga dhoofino. Haddii aad u baahato, sidoo kale waa ku habboon tahay inaad alaabada u rarto meelaha kale ee Shiinaha sida Guangzhou, Shenzhen, Yiwu, Shanghai iyo Ningbo iwm.
Waxaan nahay soo saare. Waxaan soo saareynay oo iibinaynay alaabada ilmaha iyo alaabada guryaha in kabadan 10 sano. Waxaan leenahay khadad wax soo saar oo xirfad leh iyo shaqaale xirfad leh, waxaan leenahay warshado badan.Waxaan inta badan soo saarnaa dermaha ciyaarta ilmaha, gogosha isku laaban, miisaska carruurta, isbadbadaalka carruurta iyo alaabada kale ee carruurta iyo carruurta, sidoo kale waxaan soo saarnaa istiikarada derbiga, saxarada iyo alaabada kale ee guriga.. Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin shahaadooyin badan, sida EN71, REACH, ROHS, ISO iwm
Iyada oo alaab tayo sare leh iyo sicirka wax soo saarka macquul ah, macaamiisheena waxaa si weyn loogu qaybiyey adduunka oo dhan, sida Europe (France, Germany, Russia, Ukraine, Poland, Italy, United Kingdom, Spain, Slovenia, iwm), North America ( Kanada, Mareykanka, Mexico, iwm) Iwm. Malaysia, Indonesia, Brunei, iwm), South Asia (India, Pakistan, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, iwm), Bariga Dhexe (Israel, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Jordan, Bahrain, iwm), Oceania (Australia, New Zealand, iwm), iyo Afrika (Nigeria, South Africa, Tanzania, Kenya, iwm).
Waxaan u hoggaansameynaa falsafadda ganacsiga "marka hore macaamilka, daacadnimada ku saleysan", Waxaan ku adkeysaneynaa soo saarista iyo iibinta badeecooyin tayo sare leh, sidaa darteed waxaan ku guuleysannay taageerada iyo kalsoonida macaamiil aad u tiro badan. Haddii aad xiiseyneyso alaabtayada, waad nala soo xiriiri kartaa.